वेलायतमा मन्त्रीले १ विरोधी महिलालाई घाँटीमा पक्रिएर यसरी वैठक बाहिर निकाले ! [हेर्नुहोस भिडियो]
वेलायतमा बिहीबार राति विदेश कार्यालय मन्त्री मार्क फिल्डले एक विरोधी महिलालाई घाँटीमा पक्रिएर वैठक भइरहेको स्थानबाट बाहिर निकालिदिएका छन्। यस घटनासँगै कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता फिल्डको चर्को आलोचना भएको छ। उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ।
यस घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। जहाँ वातावरण सम्बन्धी गैरसरकारी संस्था ग्रिनपिसकी अभियन्तालाई मार्क फिल्डले घाँटीमा पक्रिएर बाहिर निकालेको देखिन्छ। म्यानसन हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा चान्सलर फिलिप हामोन्ड्सले बोल्नेक्रममा महिलाहरु कार्यक्रमको विरोध गर्न पुगेका हुन्छन्।एक महिला भित्र पस्न खोज्दा फिल्डले उनलाई रोकेको देख्न सकिन्छ। फिल्डले आफ्को कार्यप्रति माफी मागेका छन्। उनले कार्यक्रममा कोही सुरक्षाकर्मी नभएको अवस्थामा महिलासँग हतियार भएको शंका लागेकाले उनलाई बाहिर निकालेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । (भिडियो)
बच्चाहरु सधै उत्सुक हुन्छन् । नयाँ कुरा जान्न, छुन, खेल्न चाहन्छन् । हरेक कुराप्रति उनीहरुको प्रश्न हुन्छ । जिज्ञासा हुन्छ । बच्चाहरुबाट सिक्नुपर्ने गुण यो पनि हो । हामीले बच्चाहरु जस्तै हरेक कुरामा उत्सुकता राख्ने हो भने धेरै कुरा जान्न सक्छौ । बुझ्न र अनुभूत गर्न सक्छौ । यस्ता थुप्रै कुरा छन्, जो बच्चाबाट हामीले जीवन जिउने कला सिक्न सक्छौ । जीवन कसरी बाँच्ने, जीवनलाई कस्तो बनाउने ? भन्ने प्रश्नको हल तपाईंको बच्चाको जीवनबाट मिल्नेछ । प्रकृतिले जस्तो दिएको छ, त्यस्तै जीवन बाँच्ने हो भने हामीले अन्यत्र भौतारिनुपर्दैन । अनलाइन खबर !